खुल्लामन्च: नेपाल, नेता र मार्टिन लुथर :
ज्यादै राम्रो लेख छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका त हुन। तर हामी जनता पनि कती सारो लाटो भएको हौ त? किन हामीलाई प्रचन्ड , गिरिजा, माधव जस्ता नेताहरु चहिने त? किन हामी लुथुर जस्ता लाई विश्वाश गर्दैनौ? किन आफ्नै आमा को नाश गर्दै छौ, किन आफ्नै बहिनी को बलत्कार मा मौन छौ किन आफ्नै दाजु भाई को बिनाश मा चुप छौ? के हामी काठपुतली हौ त कि नपुन्सक हौ?
हामी साह्रै नै परजीवि भयौँ हौ नेताप्रति !!